China Nge PCBA ipleyiti intaba inxalenye abenzi nabathengisi | UChapman
✭ Le yinxalenye yeplastiki esetyenziselwa ukulungisa ibhodi ye-PCBA, ukwenzela ukugcina i-PCBA ilungelelene kwaye iqinisekisa uzinzo lomqondiso wokuhambisa. Izinto eziyimfuneko kweli nxalenye leplastikhi ziphezulu kakhulu, kwaye ukuchaneka kwamalungu emveliso yeplastiki kufuneka abe ngaphakathi kwe-0.02mm. Ke, ukuba imiphezulu yokunxibelelana ye-PCBA ilungisiwe, imveliso ayinakuba yi-angle yoyilo, kwaye ukungunda kufuneka kuyilwe kwaye kwenziwe ngendlela yesilayidi.
✭ Izinto ezinobushushu obuphezulu bePC ezingasetyenziswanga kwezi zinto zeplastiki zizinto ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwizibane zemoto. Esi sixhobo sinezinto eziluncedo deformation amancinci, uzinzo elungileyo, ukumelana lobushushu eliphezulu kunye nokumelana ezibandayo.
✭ Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili zi-1.2343 zentsimbi eyomeleleyo. Ubume sokubumba isakhiwo entsonkothileyo, kufuneka usebenzise faka exchangeable ukuvelisa iindawo ezine ezahlukeneyo. Izinto ezinemveliso yiPC, kwaye umphezulu kufuneka ube yiPolish 600. Imilinganiselo yokuchaneka kobungakanani beMveliso +/- 0.02. Ixesha lokuhambisa ukungunda ziintsuku ezingama-38, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-27. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kumzi-mveliso waseJamani wokubumba inaliti.
Umngundo NO. I-CPM-191018
Izinto zePlastiki Ikhompyuter
Icandelo lobunzima 1.5 g
Ubungakanani Icandelo I-32.00 X 18.50 X 18.1 mm
Ubukhulu zomngundo 296 X 346 X 326 mm
Igama lomngundo Isikhuseli se-Angle
Umngxunya womngundo 1 * 2 (Sebenzisa ukufakela okutshintshanayo ukufumana iinxalenye ezine)
Imbaleki imbaleki ebandayo yeSango lasecaleni
Izinto zomngundo 1.2343 / 1.2312 / 1.2767
Ixesha lokukhokhela Iintsuku ezingama-38
Ixesha Lomjikelo Womngundo: Ngama-27
Inxalenye yegobolondo yeplastikhi isetyenziswa ikakhulu njengotshintsho kulawulo kwinkqubo yokuhamba kwemoto. Iqokobhe lokutshintsha akufuneki likhubazeke okanye ubungakanani bungaphandle kokunyamezelana, kwaye umbandela kufuneka ungabi nomlilo kunye nobushushu obuphezulu obunganyangekiyo. Qinisekisa ukuba ibhodi yethu yesekethe izinzile kwaye akukho lula ukungena kuyo.
Nokuba yeyiphi na ibhokisi yokulungisa ibhodi yesekethe, umgangatho weplastikhi yethu yeplastiki ulunge kakhulu. Siza kwenza uhlalutyo novavanyo ngokusekwe kwigobolondo le-3D osinike lona. Iqela lethu lobugcisa linokubonelela ngeenkonzo zokuphucula iimveliso. Ngohlalutyo lobuchwephesha lokuqala, sinokuqinisekisa ukuba umhla wokuhanjiswa kunye nomgangatho ugqibelele kwaye ugqitywe kakuhle.
Egqithileyo Iifilitha zeoyile Iminyinyiva yePlastiki
Okulandelayo: Ibhokisi yeepilisi yeplastiki yeentsuku eziyi-7